Pramiracetam powder (68497-62-1) hplc = 98% | AASraw Nootropics
SKU: 68497-62-1. Category: Nootropics powder
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutano hwePramiracetam powder (68497-62-1), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Pramiracetam powder iyo yakagadzirwa racetam yakagadzirwa nokuda kwechinangwa chekugadzirisa njere, nehupupuriro hwepakutanga kutsigira kushandiswa kwayo pakubatsira nguva refu yekuyeuka mafungiro. Kunyange zvazvo nzira idzi dzisiri kuzivikanwa zvachose, zvinogona kuwedzera acetylcholine synthesis.
Raw Pramiracetam powder mu SMART mishonga inodhaka
Coluracetam (MKC-231) chirwere chinonzi racetam chinonzi chiyeuchidzo chekushandisa zvinodhaka. Iyo inokwanisa kuchengetedza choline kupinda mu-neurons pavanenge vasina kukanganisa, asi iye zvino hapana humwe uchapupu hwehutano hwemaootropic madhara.
Iye zvino, uchapupu hunoshandisa Pramiracetam powder kuvanhu hunoshandisa 400mg katatu zuva nezuva kana 600mg kaviri zuva nezuva; Zvose izvi zvinyorwa zvepa dosing zvinokwana 1,200mg yePramiracetam powder zuva rega rega.
Hazvinyatsozivi kana Pramiracetam powder inofanira kutorwa nechingwa, uye haisi pachena kana 1,200mg ndiyo yakakosha mizani kana kwete. Izvi zvinodaro, zvisinei, zvinoita sezviri kubudirira.
Ndezvipi zveZvino Ndinofanira Kutarisira kubva paRa Pramiracetam powder
Pramiracetam powder inogadzirisa uropi hunoita uye inopa maratidziro ekugadzirisa kugadziriswa, zvikurukuru pamusoro pekurangarira kugadzirisa nekudzoka.
Nemhaka yokuti inowanzoita manzwiro anooneka ekutarisa pamwe nehumwe huwandu hwekunetseka mupfungwa, inowanzoenzaniswa naRitalin. Zvimwe zvezvinowanikwa zvakanyanyozivikanwa zvikuru zvePramiracetam powder zvinotevera:
Kuvandudza Mhemberero - Nokuti inokurudzira hippocampus, chikamu cheropi chinonyanya kukonzera kugadzirwa kwezvitsva zvitsva, Pramiracetam raw powder inozivikanwa semasimba ane simba kukurudzira. Vazhinji vashandisi vanorondedzera kukosha kwakanyanya mukurangarira kugadziriswa nekukurumidza kwekuyeuka, kudai kwakatsigirwa nekudzidza kwemhuka.
Kuwedzerwa Kudzidza Unyanzvi - Vashandi vanotaura kuti Pramiracetam powder inoita kuti kudzidza kuchikurumidze, nyore, uye kunakidze. Izvi zvinogona kutsanangurwa zvishoma nezvishoma nePramiracetam powder yekufambisa kwemauroplasticity.
Kuchenjerera Kwepfungwa uye Kuchenesa - Vazhinji vashandisi vanotaura kuti kutora Pramiracetam powder kunovapa manzwiro akasimba ekugadzirisa mupfungwa, kutarisa, pfungwa yekukurumidza kugadzirisa, nekufungisisa zvakajeka.
Kushamwaridzana Kwemagariro - Vazhinji vashandi vanotaura kuti kutora Pramiracetam poda yakasviba inovabatsira kufara uye kunyatsopindira mune zvemagariro evanhu, rubatsiro runogona kunge rwakabatana nehuwandu hwehutano hwehutano hunoshandiswa asi hunogonawo kunge hunoenderana nehuwandu hwehupenzi hunoita, hunogona kuderedza hutano kuzvidya mwoyo.
Kuvandudzika Kunzwisisika Kunzwika - Vashandi vanowanzotaura kugadziriswa kana kuvandudzwa mafungiro emanzwiro, kusanganisira zvakagadzirwa uye zvakagadzirisa ruzha uye zvakajeka uye zvakajeka zvakanzwisisika maonero nehukuru hwakasiyana.
Kuyeuka Kuyeuka - Muzvirwere zvishoma zvemakiriniki, Pramiracetam powder yakaratidzwa kuva mushonga unobatsira kukanganwa mupfungwa uye zvimwe zvinetso zvekufungisisa zvinokonzerwa nekukuvara kweuropi. Ichowo chimwe chezvinhu zvakasiyana-siyana zvinonzi nootropics zvakaongororwa muUnited States sekuti inogona kurapa kurasikirwa kwepfungwa zvakabatana nechirwere cheAlzheimer uye mamwe marwadzo eurological. Chimwe chidzidzo chave chakaratidza kuti chinokwanisa kuchinja chimiro chakakonzera amnesia mune vanozvipira vanoshanda kubva muzana remakore 18-65.
Iyo Yakakura Pramiracetam powder inoshanda sei
Kungofanana neonotropic dzakawanda, Pramiracetam powder inokanganisa kusunungurwa kwevana neurotransmitters, makemikari makemikari anotumira zviratidzo kubva kune imwe nhengo yesero kusvika kune imwe. Asi Pramiracetam powder inoita nenzira isina kukodzera, nenzira yakasiyana zvakasiyana nezviito zvinowanzoitwa racetam supplements, uye inokurudzira uropi mune dzimwe nzira zvakare.
Kusiyana ne-piracetam, Noopept, uye mamwe akawanda anozivikanwa neotropic, Pramiracetam poda yakasanganiswa mafuta yakasvibiswa pane mvura yakasvibiswa, zvinoreva kuti inopinda muropa kuburikidza nemafuta acids. Iyo inosvika pakukwirira kwepamusoro uye yakawandisa bioavailability nokukurumidza, inowanzo mukati maminitsi e30, uye inowedzera hafu yehupenyu hurefu hwemaawa 4-6.
Nzira dzakawanda dzinoshandiswa nekushandura zvakananga zviitiko zvehutachiwana zvehutachiona uye zvichiita kuti kuwedzerwa kushandiswa uye kusunungurwa kweveurotransmitter chaivo, asi Pramiracetam powder haisi kukonzera zvakananga kuchinja kwemaurochemical levels, uye hazviratidzi kuva nehukama hwehupi hukuru hwehutano hwemhepo.
Chinonyanya kukosha chaanoita ndechekuwedzera kukuru kwehukama hwepamusoro hwecholine hunotora mu hippocampus, chikamu cheuropi chakakosha pakuumbwa kwenguva refu yezvirangariro.
Choline ndeyekugadzirisa acetylcholine, neurotransmitter yakanyanyobatanidzwa mumagariro ekubatanidza kusanganisira yekudzidza nekukurumidza, kukuyeuka, nekufungisisa.
Nekusimudzira choline kutora, Pramiracetam yakasvibiswa poda isina kusimbisa kusunungurwa kweacetylcholine uye inokurudzira basa rakawedzerwa mumukoko. Nemhaka yokuti chikamu ichi choropi chakakosha pakuyeuchidza basa, zvinokonzera kuti Pramiracetam powder inogadzire inogona kuvandudza zvose kuumbwa kwezviyeuchidzo zvitsva uye kuchengetedzwa kwekutaridzirwa kana kurangarira kwenguva refu. Kuwedzera kwebasa iri mumukoko kunowedzera kuwedzera kwehutano kweropa, izvo zvinowedzera kusvinura uye kunovandudza mano ekuziva zviripo zvachose.
Pramiracetam raw powder angave nedzimwe nzira dzekuita zvakare. Vatsvakurudzi vakafungidzira kuti kuwedzera kune zvazvinoita pauropi, Pramiracetam powder inoshanda munzvimbo dzenharaunda kunze kweuropi dzinotenderera kune zvinyorwa zvinonzi adrenal. Zvidzidzo zvezvipfuwo zvinoratidza kuti Pramiracetam poda inogona kuwedzera kana kudzorera huropi membrane fluidity, iyo inobatsira kushandiswa kwemasero.
Kusiyana nemamwe akawanda racetam class nootropics, Pramiracetam poda yakashata hairi kuchinja kushingaira kana kuve wakamuka kana kuti manzwiro emuviri. Izvi zvinogona kurondedzerwa nePramiracetam powder zvishoma kuderedzwa pakugadzirwa uye kusunungurwa kwevana vezvematongerwo enyika vane chinonyanya kukanganisa pane mafungiro uye kuzvidya mwoyo zvakadai se serotonin, GABA, uye dopamine.
Pramiracetam powder ndechimwe chezvinhu zvinonakidza zvikuru zvemaootropic zviripo, kupa hukuru hwehupi hwe racetam-class inowedzera.
Basa rayo rakasiyana-siyana rinogadzirisa hutano hunoita basa, kuvandudza chiyeuchidzo, kudzidzira kukwanisa, kutarisa, uye kunyange kutarisa kwekunzwisisa.
Inoshanda zvakanaka pachayo uye inogona kuwedzera kuwedzerwa kune dzimwe nootropics, kusimbisa uye kuwedzera migumisiro yayo.
Nokukurumidza kuva mudiwa nevadzidzi, vanyori, uye ani zvake anofarira kuwedzera mano avo ekufunga, Pramiracetam powder ndeyevanhu vakawanda asi ari kutanga kuwana zvakagadzirwa zvakagadzirwa seanotropic inoshamisa.
Pramiracetam powder inoshandiswa pakugadzira piracetam, yakawanikwa uye yakagadzirwa naParke-Davis muZ1970s. Iyo inowedzera kuwedzera, inofungidzirwa kuti inobva ku5-30x yakawanda kupfuura piracetam.
Inotengeswa muEurope pasi pezita rezita rokuti Neupramir, Pramistar, uye Remen uye rinorayirwa ipapo kuti rishandise dyslexia, ADHD, dambudziko rekuora mwoyo nekuyeuka kunokonzerwa nechirwere cheAlzheimer uye zvimwe zvirwere zvehutano.
Yaiva nepamutemo muUnited States mu1979 asi haibvumirwi neUSFDA chero ipi zvayo yakashandiswa. Zvisinei, yakave yakanyatsodzidza seyakakwanisa kurapwa nezvinetso zvekuziva uye kukanganwa kwepfungwa kunobatwa nechirwere cheAlzheimer uye kukuvara kweuropi. Iyo iri kuve ichidzidziswa sechirapa kune zvakasiyana-siyana zvepakati remashungurudzo emamiriro ezvinhu.
Inokonzera Pramiracetam powder Iine Matambudziko Api
Pramiracetam powder inowanzochengetedzwa zvakanaka kunyange papamusoro dhizi, uye zvishomanana nemigumisiro yakaipa yakave yakanyorwa.
Nyaya inowanzozivikanwa yechirwere ndeye musoro, izvo zvinogona kudzivirirwa nekuzvitora necholine supplement.
Zvisingabatsiri zvikamu zvinowanzoonekwa, zvinosanganisira kuora kwemimba uye manzwiro ekutya kana kushungurudzika, kazhinji zvinowanzobatanidzwa nehupamhi hwepamusoro uye naizvozvo, zvinogona kudziviswa kuburikidza nekuderedza kuyerwa.
Pramiracetam powder haisi kuisa mishonga, uye hapana migumisiro yakaipa inoshandiswa kwenguva refu yakanyorwa. Ichokwadi, pane humwe uchapupu hwokuti ichi chokuwedzera chingatokurudzira hutano hwehuropi uye pane imwe nzvimbo inodzorera basa mukukwegura kwehupi.
Nzira yekutenga Pramiracetam powder kubva kuAASRAW
68497-62-1 Pramiracetam powder Yakaiswa HNMR
Nootropic Pramiracetam powder: kubatsirwa, kuyerwa, nemigumisiro